ट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु, ६ जना घाइते - Naya Pageट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु, ६ जना घाइते - Naya Page
ट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु, ६ जना घाइते
सुनसरी, २७ असोज । सुनसरीको इटहरीमा मंगलबार राति भएको दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ । अन्य ६ जना घाइते भएका छन् ।
एउटा ट्रकले कार र सिटी सफारीलाई ठक्कर दिँदा सफारीमा सवार इटहरी ५ का २३ वर्षीय इश्वर राउतको ज्यान गएको हो । टाउकोमा चोट लागेका उनको उपचारको क्रममा विराट नर्सिङ होममा राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार गए राति पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको ना ४ ख २९२४ नम्बरको ट्रकले इटहरी ५ स्थित महेन्द्र राजमार्गमा प्र १–०२–२२३ ह १४३६ नं. को सिटी सफारीलाई ठक्कर दिएको थियो । भाग्ने क्रममा तीव्र गतिमा रहेका कारण इटहरी १६ बालग्राममा प्र ३–०१–०२४ च ९७२२ नं. को कारलाई समेत ट्रकले ठक्कर दिएको थियो ।